Ukuhlolwa kwe-Cavitation Erosion - Hielscher Ultrasound Technology
Ukuguguleka kwe-cavitation kwenzeka ezindaweni ezibonakalayo ezivezwa ku-cavitation enkulu ye-ultrasonic. Ukuhlolwa kokuguguleka kwe-cavitation kuyindlela esheshayo yokukala ukumelana kokuguguleka kwezinto noma ukumbozwa kwengcindezi enkulu nezinye izinto zokuguguleka komhlaba. Inikeza ukulinganisa okulula kokulawulwa kwekhwalithi kanye nokusebenziseka okuhle ngenkathi kwenziwa ucwaningo lwezinto ezibonakalayo noma ukwakheka kwenhlanganisela.
Kungani Kufanele Usebenzise Ukuhlolwa Kokuguguleka kweCavitation?
Ukuguguleka okuqhubekayo noma ukugqwala kungadinga ukushintshwa okuvela kwezinye izingxenye noma ukuvuselelwa kokumboza komhlaba. Ukuguguleka komhlaba okwenziwe ngenxa yokuthonya kwemishini noma kwamakhemikhali yinqubo ethatha kancane iholela ekubhujisweni kancane kancane kwezinto ezibonakalayo. Ngakho-ke, ukuhlolwa kokugwema kokuguguleka kwezinto ezibonakalayo noma umthelela wokuguguleka koketshezi nokushibilika, kungaba inqubo yokuchitha isikhathi kakhulu.
Ukuhlolwa kokuguguleka kwe-Ultrasonic kuveza imvelo yendawo emikhawulweni elawulwayo, enamandla, ephindaphindwayo. Lokhu kuholela ekuguguleni okukhulu kwendawo ebonakalayo ngesikhathi esifushane. Ungashesha ukukala ukumelana kokuguguleka kokulawulwa kwekhwalithi ejwayelekile ekukhiqizeni, ukuhlolwa kwezinto ezingenayo noma ngesikhathi sokucwaninga nentuthuko.
Izicelo ezijwayelekile zifaka ukuhlolwa kwe-metallurgisation, ukuhlolwa kokwakhiwa kwenhlanganisela, ukuhlolwa kokufakwa kwezinhlelo zokulinganisa noma ukuhlolwa kokuguguleka kokuvinjwa koketshezi
I-UIP1000hdT (1000W, 20kHz) Ukusethwa kokuhlolwa kokuguguleka kweCavitation
Kungani Imbangela Ye-Cavitation Ingaphezulu kokuguguleka komhlaba?
Amadivayisi we-Ultrasonic, afana ne-UP400St (400 watts, 24kHz) noma i-UIP1000hdT (1000 watts, 20kHz) imibhangqwana ye-ultrasonication enamanzi, njengamanzi. Ukujikeleza okusheshayo kokudlidliza kwe-vibrate ku-ketshezi kukhiqiza futhi kuqubule ama-bubble we-cavitation. Lapho ama-bubble ewa, ukucindezelwa okukhulu kwemishini okwenzeka endaweni ethile kwenzeka kuketshezi nakwindawo ezibonakalayo ezibonakalayo. Ama-jets ama-Liquid afinyelela ku-1000km / h kanye nezingcindezi zasendaweni ezifika ku-1000atm kuholela ukukhathala okusheshayo endaweni ebonakalayo. Lokhu kungasusa izingqimba ze-oxide noma zokudlula, ezimboze noma ezifashisayo. Kungadala ukujikijela kwezinto eziqinile, njengensimbi, titanium, i-aluminium, ipulasitiki noma ingilazi. Ngakho-ke, ukuhlolwa kokuguguleka kwe-cavitation kuyindlela yokuhlola ebhubhisayo.
I-Cavitation Erosion ku-40mm Titanium Surface
Ngabe isebenza kanjani i-Cavitation Erosion Testing?
Ukuguguleka kwenqolobane yezinto ezibonakalayo ezibonakalayo kubangela ukulahleka kancane kwezinto ezibonakalayo. Ungalinganisa ukulahleka kwezinto ezibonakalayo kalula ngesisindo impahla esikalini sokucacisa ngaphambi nangemva kokuchayeka kokuguguleka kwe-cavitation. Ukuguqulwa kwesisindo okujwayelekile kovavanyo lokuguguleka kwe-cavitation kuphakathi kuka-1 no-30mg. Ngokumiswa okwengeziwe, ungakwazi ukubala ukulahleka kwevolumu ngokuhlukanisa ukwehliswa kwesisindo ngobuningi bezinto ezibonakalayo. Ubunzulu bokungena kokudlule (MDP) bubalwa ngokuhlukanisa ukulahleka kwevolumu yindawo yesakhiwo esilinganisiwe. Ngenye indlela, ungalinganisa ukujula okuvundayo noma ivolumu elihambile. Ungasebenzisa ukuhlaziywa kwe-microscopic ukuthola eminye imininingwane ephathelene nephethini yokuguguleka.
Uma usebenzisa i-Hielscher idivayisi ye-ultrasonic yokuhlolwa kokuguguleka kwe-cavitation, ungasetha kabusha ibanga lokushisa nobubanzi bezingcindezi ofuna ukusebenza kukho. Ungaguqula amplitude we-sonication. Zonke izinhlaka zibhekelwe, zikhonjiswe futhi zikhonjelwe ekhadini le-SD. Awudingi ukufakwa kwesoftware yokuphathelene. Uma uthanda, ungalawula futhi uqaphe inqubo ye-ultrasonic kusuka kusiphequluli sakho esijwayelekile sewebhu, uma uxhuma idivaysi ye-ultrasonic kwikhompyutha yakho ngekhebula le-ethernet (lifakiwe).
I-Cavitation Erosion Ku-Titanium Surface
Iyiphi Indlela Ejwayelekile ye-ASTM G32 yokuGuguleka Kokusebenzisa i-Vibratory Apparatus?
Izinga le-ASTM G32-16 lichaza indlela esezingeni eliphezulu yokuguguleka kwe-cavitation. Kuchaza isivivinyo esilula, esinokunqotshwa futhi esizalwe kabusha sokuqothula futhi siqhathanise ukumelana nokuguguleka kwe-cavitation kwezinto ezihlukile. Ukucaciswa kwe-ATSM G32-16 kuyasiza ukuqhathanisa imiphumela yakho neyokunye ukushicilelwa. Uma ungathanda ukusebenzisa ukuvivinywa kokuguguleka kwe-cavitation ngokulawulwa kwekhwalithi, sincoma ukuvumelanisa umthetho olandelwayo wokuhlola ukuguguleka we-cavitation nezidingo zakho ezithile. Sizokujabulela ukukusiza ekwakhiweni kweprotocol yokuhlolwa kokuguguleka kwenhliziyo eyenziwe ngokwezifiso. Ngemininingwane engaphezulu kokuhlolwa kokuguguleka kwe-cavitation ngokuhambisana ne-ASTM-G32, sicela uchofoze lapha!
Kungani Kufanele Ngisebenzise Umkhawulo Wamandla Esikhundleni Somkhawulo Wesikhathi?
Izincwadi eziningi zokushicilela nezinqubo zokuhlola ukuguguleka zichaza isikhathi sokuvezwa kwe-cavitation. Kumadivayisi we-Hielscher ultrasonic, ungahlela kabusha isikhathi se-sonication futhi uhlelo luzoma ngemuva kokuthi isikhathi sesedlule. Ungabala ukukhuphuka kwesilinganiso sokuguguleka kwe-cavitation ku-mm / hr noma mm3 / hr. Umkhawulo wesikhathi wamukelekile, kuphela uma ungaguquli noma yimiphi imingcele, njengezinga le-liquid, amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa, ukwakheka kwe-liquid noma igebe phakathi kwe-sonotrode kanye nezinto ezibonakalayo. Uma noma iyiphi yalezi zinhlaka ishintsha, namandla e-sonication kanye namandla we-patrage. Kubalulekile, ukuthi amandla wetha wangempela athunyelwe ku-ketshezi akumele atshintshe phakathi nesikhathi sokuhlolwa.
Kumadivayisi we-Hielscher ultrasonic ungabeka umkhawulo wamandla. Kulesi simo, ithuluzi le-ultrasonic lizoyeka, ngemuva kokuletha amandla acacisiwe we-ultrasonic. Idivayisi ye-Hielscher izokhombisa bese iqopha nemingcele, njengamandla wetha wangempela, amplitude, ingcindezi kanye nokushisa koketshezi. Ukushintshashintsha kwamandla noma ushintsho ngamabomu ngamapharamitha kuzobuyekezwa lapho kusetshenziswa umkhawulo wamandla. Ungabe usucacisa izinga lokuguguleka kwe-cavitation ku-mm / kWhr, mm3 / kWhr noma mg / kWhr.
Uma ukala isampula phakathi kwezikhathi zokuguguleka kwe-cavitation, ungakha ijika elibonisa ukuncipha kwesisindo (isilinganiso sokulahlekelwa kwesisindo esikhathini ngasinye samandla) ngaphezulu kwamandla okuqina.
Ngemiphumela eqondile, idivaysi ingenza ukucabanga okuzenzakalelayo (amasekhondi angama-30). Lokhu kukala amandla akho konke ukubeka kwe-amplitude emoyeni ngokucindezela okukhona. Idivayisi ye-Hielscher isebenzisa le datha yokulinganisa ukunikeza amanani anamandla we-net aqondile ngesikhathi sangempela.
I-Cavitation Erosion Test Specimen (ASTM G32 – 16)
Ithiphu engenziwa esikhundleni se-ASTM G32 – Ukuhlolwa kokuguguleka kweCavitation
Ukusethwa Kokuhlola Okungatholakala Kokuhlolwa kwe-Cavitation Erosion
Sizojabulela ukuxoxa ngezidingo zakho zokuhlola ukuguguleka. Sicela usebenzise ifomu elingezansi ukuxhumana nathi! Uyacelwa ukuthi unikeze imininingwane eyengeziwe mayelana nephrojekthi yakho, njengezinhlamvu ezizohlolwa ngosuku, usayizi wesimodeli nezinto ezibonakalayo.
I-UP400St ene-beaker ebolile
Ngokuma okulula ukusetshenziswa kokuhlola, sincoma i-UP400St (400W, 24kHz) nge-sonotrode S24d14D (ububanzi obuyi-14mm tip). Amanye ama-sonotrodes we-diode ayatholakala. Le homogenizer enamandla enamandla, iza nophenyo lokushisa kanye ne-othomathikhi ye-SD-Card protocoling. Ungasebenza i-UP400St nge-S24d14D ngamamodeli kusuka kuma-20 kuye kuma-99 micron. Sincoma ukusebenzisa isitsha soketshezi esinamandla ngokubandayo, lapho ubeka khona isampula noma uhlukanise ibanga elichaziwe ukusuka kuthiphu le-sonotrode. Idivaysi ye-UP400St ingasebenza amahora angama-24, izinsuku eziyi-7 ngesonto ngokuqhubekayo emandleni agcwele.
I-UP1000hdT eneseli yokuhlola ebolile
I-Hielscher UIP1000hdT (1000W, 20kHz) ene-sonotrode BS4d22 (ububanzi obuyi-22mm tip) inamandla amaningi, ingagijima ngamamaki aphezulu futhi icubungule isampula enkulu. Iyunithi iza nophenyo lokushisa kanye ne-othomathikhi ye-SD-Card protocoling. Ama-sonotrodes amakhulu amakhulu noma ama-sonotrodes anezeluleko ezithathe indawo ayatholakala. Singakunika izesekeli ezidingekayo, njengokuma, ukulungiswa kwamandla, isikhuhlisi esinamandla sokupholisa noma umkhumbi wokuhlola wejekethi ngokubeka kubakaki bezinto zakho.
I-UIP2000hdT enengqamuzana elivivinya kakhulu, elibhaliwe leseli
Ukuhlolwa kokuguguleka kwe-cavitation kuketshezi olucindezelwe, sincoma i-UIP2000hdT (2000 watts, 20kHz). Njengamanye amayunithi, kufaka phakathi iprojekhthi yokushisa kanye ne-othomathikhi ye-SD-Card protocol. I-sensor ye-digital sensor ye-digital ozikhethela iyasiza kakhulu ukuqapha umfutho wokuqopha ingcindezi.
I-Cavitation Erosion Testing Njengensizakalo
I-Hielscher Ultrasonics inesikhungo sobuchwepheshe esingakwazi ukwenza ukuhlolwa kokuguguleka kwe-cavitation njengensizakalo. Ukusuka kumakhompiyutha wezinsimbi ezijwayelekile, ukubonwa kwesisindo ngokunemba nokuchayeka ngaphansi kwezimo ezilawulwa futhi eziphindaphindekayo kumbiko ophelele kanye nokubuyiselwa kwamasampula kuwe, uHielscher angenza ngokwezifiso protocol yokuhlola ukuze ihlangabezane nezidingo zakho.
Yini Ethonya Ukuqhekeka Kwezisekelo?
I-Ultrasonic cavitation iholela ekuguguleni kwe-cavitation. Lapho i-ultrasonication ebushelelezi kakhulu, kushesha kakhulu ukuguguleka. Ukuhamba ngezinyawo okukhulu kungadonsa indawo ebonakalayo, ukuthi umgodi othambile kakhulu awunakuduka nhlobo. Ngakho-ke kungenzeka kube khona ubukhulu obukhulu obudingekayo ukuze impahla yakho ihlolwe.
Ukudlidliza kwe-vibration kuyinto ipharamitha ebaluleke kakhulu yomfutho we-sonication kanye nokuqina kwe-cavitation. Izikhulisi eziphakeme ziveza umgodi oqina kakhulu. Ku-ultrasonics, i-amplitude ichazwa ku-micron njengethani eliphakeme kakhulu. Ama-Hielscher amadivaysi e-ultrasonic akuvumela ukuthi uguqule i-amplitude ebangeni elibanzi. Uma sesilungisiwe, idivaysi igcina amplitude kuleveli elungisiwe ngaphansi kwazo zonke izimo zomthwalo. Lesi yisici esibalulekile ukuze kube nezimo zokuhlola ukuhamba ezinqolekayo nezphindaphindekayo.
Ama-Hielscher Amadivayisi we-Ultrasonic akuvumela ukuba wenze ukuhlola kokuguguleka kwe-cavitational at amplitudes kusuka ku-2 micron kuya ku-200 micron noma ngaphezulu.
Ingcindezi Yotshwala Ngesikhathi Sonication
Amaphrothokholi amaningi ajwayelekile wokuhlola ukuguguleka kwe-cavitation asebenzisa i-ultrasonic cavitation ekucindezelweni okukhona. Umfutho we-Liquid uyinto yesibili ebaluleke kakhulu ekuqineni kwe-sonication. Ukukhuphuka okungu-10% kwengcindezi engaphezulu kuzokhulisa amandla e-sonication cishe nge-10%. Ukuhamba ngamandla ngokwengeziwe kwehlise isikhathi esidingekayo ukuze kufinyelelwe izinga elithile lokuguguleka kwe-cavitation. Imvamisa yohlolo olulodwa ingathatha indawo ethile ukusuka kumaminithi ayi-15 kuye kwangama-120. Uma unezinhlobo eziningi zokuhlola, ukusebenza ekucindezelweni okuphezulu kunganciphisa isikhathi sesivivinyo ngasinye kakhulu. Ukuhlolwa ku-5 barg (73psig) kudinga i-approx. Isikhathi esingaphansi sama-80% esivivinyweni ngasinye.
I-Hielscher inikezela ngamaseli wokuhlola acindezelwe-nge-sensor ingcindezi yedijithali yokuhlola ukuguguleka kwe-cavitation. Usebenzisa iseli elicindezelwe kakhulu, ungalawula futhi ulondoloze ingcindezi ngesikhathi sokuhlolwa ngakunye. I-generator ye-ultrasonic iqapha inzwa yokucindezela njalo futhi iprinta ukucindezela kwangempela kufayela le-CSV elihambisanayo ekhadini le-SD (kufakiwe). I-Hielscher inikezela abalawuli bezingcindezi ukusetha futhi balondoloze ingcindezi yokusebenza.
Njengamaseli wokuhlola okuqinile we-Hielscher ingcindezi yokuhlola ukuguguleka kwe-cavitation ikalwe nge-tp 5barg (73psig). Izingcindezi eziphakeme ezifika ku-300barg (4350psig) ziyatholakala ngesicelo.
Ngokuvamile, ukuhlolwa kokuguguleka kwe-cavitation kusebenzisa imvamisa ephansi ye-ultrasonics ephezulu ebangeni le-18-30kHz. Kuleli banga ukushintshashintsha imvamisa kunomphumela obukhulu ekuqineni kwe-cavitation. Wonke amadivaysi e-Hielscher asebenza kaningi.
Iseli lokuvivinya elilinganiswa ukuphakama ukuze lilinganiswe nokuhlolwa kokuguguleka kwe-cavitation (ASTM G32-16)
Ibanga ukusuka Sonotrode
Izinto ezizovivinywa zingafakwa ku-sonotrode noma ngaphansi kwe-sonotrode. Ungenza isampuli esetshenzisiwe enemicu futhi uyimise kuze kube sekupheleni kwe-sonotrode ye-ultrasonics. Kulesi simo, isampula iyavevezela endaweni ephakeme ye-ultrasonic ekhiqize futhi ikhiqize i-cavitation ebusweni bayo. Lokhu kudinga imishini yokucacisa hhayi yonke impahla efanelekile kulokhu.
Ngenye indlela, ungalungisa ingxenye noma isampula ekusondeleni ngaphansi kwe-sonotrode ye-titanium. Kulesi simo, i-sonotrode ye-titanium ikhiqiza i-cavitation futhi ingaphezulu lezinto ezibonakalayo livezwe ku-cavitation. Le yinketho elula kakhulu njengoba ungabeka isampula yosayizi obahlukahlukene esitokisini sokuhlola. Uma usebenzisa i-sonotrode enkudlwana, njenge-sonotrode engu-50mm noma 80mm ubukhulu, ungadalula izingxenye eziningi ekuguguleka kwe-cavitation ngasikhathi sinye. Lokhu kusebenza kakhulu lapho kufanele uvivinye izingxenye eziningi ngosuku, isib. Ngokulawulwa kwekhwalithi.
Kuzona zozimbili lezi zindawo, ibanga phakathi kwe-sonotrode ye-ultrasonic nendawo ebonakalayo eduze kwayo kubaluleke kakhulu. Ngokuvamile, ukuguguleka kwe-cavitation kushesha lapho usebenzisa ibanga elincane. Ibanga elijwayelekile lisuka ku-02 kuye ku-15mm. Ngemiphumela engapheli, kufanele usebenzise ibanga elifanayo kuzo zonke izivivinyo.
I-Warmer fluid iholela ekujuleni kwenhliziyo okuphezulu kwe-ultrasonic. Okokufaka kwamandla we-mehendi ye-mehendi ungene ketshezi kuzokwenza ukuthi uketshezi lushise. Ukuze kugcinwe izinga lokushisa njalo ngesikhathi sokuvivinya kokuguguleka kwe-cavitation ngayinye, uketshezi kufanele lupholisiswe. I-Hielscher inikezela ngeziqukathi ezihlanganisiwe namaseli wejazi-eqinile. Ngenye indlela ungasebenzisa ikhoyili epholile ku-beaker noma ungabeka i-beaker ku-ice-bath. Isipholisi esihamba ngejazi noma ngekhoyili epholile sisusa ukushisa okuvela kuketshezi.
Ama-Hielscher amadivaysi e-ultrasonic, afana ne-UP400St noma i-UIP1000hdT eza ne-proT lokushisa kwe-PT100 (kufakiwe). I-generator ye-ultrasonic iqapha izinga lokushisa langempela le-liquid ngokuqhubekayo futhi ifinyelela izinga lokushisa kufayela le-CSV elihambisanayo ekhadini le-SD (lifakiwe). Ungasetha i-generator ukuthi imise okwesikhashana isivivinyo sokuguguleka kwe-cavitation uma izinga lokushisa likamanzi lingaphambuki kakhulu endaweni yakho ehleliwe, isib. Ngenxa yomthamo wokupholisa onganele. I-generator ingakwazi ukuqala kabusha i-sonication ngokuzenzakalelayo lapho uketshezi lufika futhi lokushisa olubekiwe.
Ekuhlolweni kokuguguleka kwe-cavitation isebenzisa amanzi, njengamanzi acwilisiwe. Uketshezi oluhlukile lubonisa izici ezihlukile ze-cavitation. Uma amanzi ewonakalisa izinto zakho, ungafuna ukuvivinya ezinye iziphuzo, njengamafutha we-silicone aphansi noma i-organ sol solution ukuze uqede noma wehlise isici esonakalisayo. Ngenye indlela, ungenza uketshezi luwonakalise kakhudlwana, isb ngokuguqula i-pH noma i-abrasive xaxa ngokufaka izinhlayiya ezinkulu. Ungasebenzisa ukuhlolwa kokuguguleka kwe-cavitation ukukala ukuguguleka nokugqwala koketshezi, njengokudonswa phansi kwamadaka noma ukuhlola ukusebenza kwe-corrosion noma ukuguguleka kwe-inhibitors.
Lapho wenza ingxenye noma umfuziselo, imishini ye-CNC, ukugaya noma ukugaya izimbotshana ibangela ukulungiswa kwesakhiwo sokusanhlamvu esiseduze kwendawo ebonakalayo. Lokhu kunciphisa ukumelana kokuguguleka.
Izendlu zokudlula / ze-Oxide
Ngokuvamile ukuguguleka nokugqwala kwenzeka ngasikhathi sinye. Amanzi, njengamanzi agciniwe, ahlanganisiwe noma ahlukaniswe ngamatshe angadalwa izinto eziningi. I-Ultrasonic cavitation inyusa ukugqwala. Izendlalelo zokudlula, isb. Ku-aluminium ehlanganisiwe kuzonyusa ukumelana komhlaba okugugile kanye nokugqwala.
Ngabe Ukuvivinya Kokuguguleka Kwe-Cavitation kunemiphi imikhawulo?
Amanye ama-elastomers angadinga ukuvezwa okukhulu kwe-cavitation ukukhombisa noma yikuphi ukuguguleka kwe-cavitation nhlobo. Kulokhu, i-sonication ngaphandle kweseli elicindezelwe kungenzeka ingakhombisi yimuphi umphumela olinganiselayo.
I-ASTM G32 -16 15.9mm Sonotrode eneliphu ebuyekayo
Ukuhlolwa kwe-Cavitation Erosion (ASTM G32-92)
Iphrothokholi Yesivivinyo Sokuhlola I-Cavitation Erosion Testing
Ungalanda ikhasi lokusebenzela ithempulethi yakho ngezindlela ezilandelayo: PDF, Microsoft Excel XLS, noma Izinombolo ze-Apple.
Isampula Lekhasi Lokwenza Ukuhlolwa Kokuguguleka kweCavitation